Ngo velikohanskaya IHhovisi Chung-shu-shzn ( "ihhovisi likanobhala enkulu lombusi") yahlonywa 1231, induna okuyinto kuthiwa imithombo Chinese, wamiswa Yelü Chucai. Ngasikhathi sinye, Qinghai, Kere, wavuswa esikhundleni sokuba "ungqongqoshe ilungelo" (yu-chen-hsiang) kanye Jurchen Nyanhe Zhongshan - "UNgqongqoshe Kwesokunxele" (Zuo-Cheng-hsiang).
Kwakuyisenzo esasibonisa umzimba zokuphatha, kamuva, lapho Kublai Khan, owasebenza njengomkhulumeli kuhulumeni of the Empire, amaMongol. Ukuqokwa lii Chu-cai no Nyanhe Zhongshan lezi izikhundla kusho ukuthi kuqala waphuma waba ngumlindi ukulawula kombuso enyakatho yeChina, kanti eyesibili kwaba umsizi wakhe. By the way, amaMongol sasingakafiki ababeyizazi Chinese ngesilwane esifuywayo ezingeni futhi wonke umuntu wayephethe imibhalo esemthethweni, ngokuthi bicheechi (the "uNobhala"). Empeleni, ekuqaleni kwazo Omkhulu Chancellery wema Qinghai. ,, Eqinisweni eyaziwa ukuthi ngaphandle kwakhe isinqumo-Mongolian Uighur zamagama idokhumende ebhaliwe kolunye ulimi, akazange angene force, ngoba, kusobala, inkantolo akazange ngokugcwele izikhulu nemongolskim, kuhlanganise lii Chu-cai. Mongolia Mid XIII V ....
Nokho, umgomo onjalo Ugadei savusa nokuphikiswa okunamandla okuvela abameleli amaMongol izikhulu nentshisekelo ukuphangwa okwengeziwe yezwe ayenqotshiwe, kanye nabangane babo lapho sibhekene kweziphathimandla zempi zendawo, abanikazi izigodi adalwe kubo. Ngokwesibonelo, ngemva kwalesi sinqumo we Khan intela labantu North China e 1230 a Baie de ngokusobala nowayekade engumfundi Khan ekhaya, ahlinzekwa nje ukusika lonke labantu, nezwe yaphenduka idlelo.
Kodwa Yelü Chucai athonya UKhan Omkhulu e inzuzo enkulu khona inkantolo ukuxhaphaza abantu nezisetshenziswa eNorth China ngokusebenzisa izintela, ukunikeza ngayo izilinganiso isiliva, usilika nokusanhlamvu zingaba ngonyaka.
Lapho 1231 ngesikhathi ekufuna of Ye-lu Chu-cai ukuthi awukhiphe Khan ku ngokuzijamela bentando intela, kidanets Shi-mo Syandebu-Mongolian darugachi Yanjing (yesimanje. Beijing) futhi umbusi igama elifanayo lu, wangena isivumelwano, yena nomalume wakhe Ugadei Tae-muge-otchigin ukuthi ukuthumela zize Elikhulu khan isithunywa uzwakalise ukungathembani! Nina Chu-cai ke, waze wafuna ukubulawa kwakhe, isola ke lokwephula enqabelo bendabuko-Mongolian (ngokusobala, baxoxa mayelana enqabela ezinjalo, njengoba egeza agelezayo, le desecration komlilo, ukunyathela embundwini).
Tsitsibeli: sauce ashisayo iresiphi
Darren Fletcher: isithombe, biography
Uyini Amandla okuthenga the lwemali?